Football Khabar » राकिटिक बार्सिलोना छाडेर कतै नजाने !
राकिटिक बार्सिलोना छाडेर कतै नजाने !
स्पेनिस बार्सिलोनाका क्रोएसियन मिडफिल्डर इभान राकिटिकलाई क्लबले बेच्न चाहेको चर्चा सरुवा बजार खुलेदेखिकै हो । अझै पनि बार्सिलोनाले उचित मूल्य र सही अवस्थामा राकिटिक बेच्न सक्ने सम्भावना छ ।
तर, राकिटिक स्वयं भने क्लब छाड्ने पक्षमा छैनन् । हाल प्रि–सिजन टुरअन्तर्गत राकुटेन कप खेल्न जापानमा रहेका उनले मिडियासँग कुरा गर्दै बार्सिलोनाकै करिअरलाई निरन्तरता दिने आफ्नो योजना रहेको बताएका छन् । यदि क्लबको फरक योजना भए त्यो अर्कै कुरा हुने पनि उनले बताए ।
‘बार्सिलोनामा निरन्तरता दिने मेरो योजना छ, यसमा म स्पष्ट छु,’ राकिटिकले भने, ‘म यहाँ आएदेखि नै खुसी छु । र, यहाँ रहन पाउँदा खुसी हुनेछु ।’
बजारमा आफ्नो सम्भावित सरवा चर्चा रहे पनि आफूले प्रशिक्षक र क्लबसँग कुरा गरेको पनि उनले बताए । ‘मैले मेरो भविष्यबारे आफैंले खुलेर क्लब र प्रशिक्षकसँग कुरा गरेको छु । म मेरो अवस्थाप्रति स्पष्ट छु । यदि क्लबको अर्कै योजना भए त्यो मलाई थाहा छैन ।’
राकिटिकले बार्सिलोनाको टोलीमा आफूले फुटबलको मज्जा लिइरहेको पनि बताए । ‘म फुटबलसँग अझै रमाउन चाहन्छु । त्यसै पनि बार्सिलोनासँग अझै मेरो २ वर्ष सम्झौता बाँकी नै छ,’ राकिटिकले भने, ‘क्लब छाड्ने वा यहाँभन्दा बाहिरको भविष्यबारे म कुरा गर्न चाहन्नँ ।’
बार्सिलोनाले हालै अनुबन्ध गरेका नयाँ मिडफिल्डर फ्रेन्की डे जोङका कारण उनको भविष्य खतरामा पर्ने धेरैको विश्लेषण छ । तर, राकिटिक भने आफूले आफ्नो स्थानका लागि संघर्ष गर्ने बताए । ‘यो क्लबमा सबै आउन र आफूलाई साबित गर्न चाहन्छन् । म पनि हिजो यही सोचेर आएको थिएँ । आज पनि मेरो यही अवस्था छ,’ राकिटिकले भने, ‘फ्रेन्की एक राम्रा खेलाडी हुन् । हामी टिममा आ–आफ्नो स्थानका लागि लड्छौं ।’
प्रकाशित मिति ६ श्रावण २०७६, सोमबार १३:५९